Faayilii Poolisii Finfinnee
Itiyoopiyaan namoota 15 kanneen embasii tokkummaa emireetota Arabaa kan Finfinnee jiru irratti haleellaa raawwachuuf shiran to’annaa jala oolchuu isaa tajaajila tika nagaa maqaa dhda’uun sabaa himaan biyyattii gabaasee jira.
Gareen kun namoota biyyootii alaa irratti fuuleffatuu irratti hojjetaa ture jechuu dhaan dhaabi presii Itiyoopiyaa gabaasee jira. Meeshaaleen lakkoobsi isaanii hin tuqamin, dhukaatotaa fi galmeeleen ennaa duula geggeessamee qabamuu dhaabbatichi beeksisee jira.
Gareen kun ergama isaa dhaaa shororkeessota biyyootii alaa fudhachuu dhaan miidhaa hamaa qabeenyaa fi lubbuu namaa irraan geessisuuf qophaa’aa turuu beeksiseera dhaabi kun minisriin dhimma alaa kan tokkummaa emireetota Arabaa gabaasa ganaaf battala deebii hin kennine.
Gareen shakkamu kan lammataa immoo gurmuulee diplomaasummaa tokkumaa imireetota arabaa biyya hollaa Sudaan keessaatti karoorsuu dhaabbati presii Ethiopia beeksisee jira. Tajaajilli tika nagaa Ethioa gita isaa kan Sudan waliin ta’uu dhaan dhimma shira kanaa ilaalchisee hojjetaa jira jedhameera. Angawoota Sudan biraa battala ibsi kenname hin jiru
Komiishinerri Dhimma Baqattootaa Kan Tokkummaa Mootummootaa Naaannoo Tigraay Daawwatan
Tigraay Keessa Haallii jiru Akkaan Na Yaaddessee Jira: Antoniyoo Gutarrees